Baargaal oo laga dhisayo dugsi ay agoontu wax ku baartaan oo qurba-joogtu maal-gelisay (Dhegeyso) – Radio Daljir
Oktoobar 31, 2013 4:40 b 0
Baargaal, October 31, 2013 – Degmada Baargaal ee gobolka Guardafu ee Puntland ayaa maanta waxaa laga dhigay dugsigii ugu horeeyey ee ay wax ku barannayaan caruurta agoonta ah ee gobolka iyo deeganada ku dhow dhow.
Gudoomiyaha gobolka Guardafu Cali mire Ismaaciil ayaa si rasmi ah u dhagax-dhigay dugsigan cusub oo ah mid balaaran isla markaasna la filayo in ay ka faa?iidaystaan ardayda deegaano badan oo gobolka ku xeeran.
?Qurba-joogta gobolka ayaa maal-geliyey dhismaha iskuulkan oo la doonayo in uu noqdo mid baaxad wayn oo sida laga filayo u shaqeeya, kharashka kala duwan ee ku baxaya waxaa laga keenay dadka debeda jira.? Ayuu yiri Cali Mire gudoomiyaha Guardafu.
Gudoomiyaha gobolka Guardafu oo la hadlayey idaacada daljir sidoo kale waxaa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey dib-u-soo kabashada deeganada gobolka iyo mashaariic badan oo la filayo in laga hir-geliyo sida uu hadalka u dhigay, waxaa uu sheegay in is bedel wayn jiro.
Dhegeyso: Gudoomiye Cali Mire Ismaaciil oo u waramay Cabdiraxmaan Axmed oo daljir ka tirsan
Gen. Shire ?umadda yaan la weyrixin oo yaan la luggoyn ma jiri doono shir ka dhacaya Taleex?